Teknụzụ ise ga - arị elu na 2016 | Akụkọ akụrụngwa
Enweghị oge ole na ole anyị chọrọ iji ruo eru Virtual Reality dị ka teknụzụ nke 2016, na-enweghị mgbagha ọ bụ, mana a ga-enwe ọtụtụ ozi ọma na ụdị ngwaọrụ ndị ga-abụkwa ewu ewu ka afọ na-aga. Anyị ga-enyocha teknụzụ ise nke ga - arị elu na 2016 niile wee kpochapụ ihe ọhụụ teknụzụ ma ọ bụ ụkpụrụ anyị ga - enwe na afọ na-abịanụ 2017. internetntanetị nke ihe, eziokwu mebere, ụgbọ ala kwurula ... Kedu ihe ị chere? Ka anyị chọpụta ọnụ nke kachasị mma na teknụzụ nke afọ.
1 Internetntanetị nke ihe
2 Batrị ọgbọ ọzọ
3 Vehiclesgbọ ala kwurula
4 Amamịghe echiche
5 Ezigbo eziokwu
Internetntanetị nke ihe
E nwere ụlọ ọrụ, dị ka Apple, kpebisiri ike ime ka IoT bụrụ onye a ma ama, HomeKit bụ ngwa mmepe ha iji chịkwaa ụlọ obibi ndị mara mma naanị site na ngwaọrụ mkpanaka anyị. Otú ọ dị, ọ bụghị nanị ya na ọgụ a, ọtụtụ ụlọ ọrụ gụnyere ngwa mkpanaka na njikọ ịntanetị na ngwaọrụ ndị ahịa gị. Ọ bụrụ na igwe onyonyo amamịgherịrị ọkọlọtọ, friji, thermostats na ọbụnakwa akpịrịkpa akabeghị, ngwaọrụ ndị na-eji nwayọ nwayọ abịa.
Batrị ọgbọ ọzọ
Ndị na-arụpụta akụrụngwa, na ọkachasị ndị na-arụpụta ụgbọ eletrik na ngwakọ, na-achọpụta na enwere ọtụtụ ihe iji meziwanye n'ọhịa batrị. Ya mere, ha na-eji Ihe ohuru dị ka aluminom na zinc iji mee ka batrị ọhụrụ dị ike ga-ekwe omume.
Vehiclesgbọ ala kwurula
Tesla Motor emeworị ya, Model S na-agụnye nsụgharị nke autopilot ya nke na-eke ndị nlelị na ndị hụrụ ya n'anya n'otu oge ahụ. N'akụkụ aka nke ọzọ, Google na-arụkwa ọrụ n'ụgbọala iji gbaara gịHa anaghị ezo ya, ọ bụ ọdịnihu na ọ na-abịa.
Anyị anaghị echefu AI nke Microsoft malitere na Twitter wee ghọọ pro neo-Nazi. N'aka nke ọzọ, ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ nwere mmasị na ọgụgụ isi na otu ọ nwere ike isi nyere ụmụ mmadụ aka na ndụ ha kwa ụbọchị, ọkachasị dị ka ndị enyemaka na-akwadoghị.
Nwanyị nwanyị nke teknụzụ niile na-apụta na 2016. Site na mwepụta nke ngwaọrụ maka egwuregwu vidio ha na -emepụta atụmanya obi ọjọọ. A ka nwere ọtụtụ ọrụ na-aga n'ihu, mana o doro anya na eziokwu mebere na-adọta ọtụtụ ndị na-azụ ahịa, yana ebe ego dị, enwere teknụzụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Teknụzụ ise ga - ebili na 2016 niile
GIF ndị Animated na Chakwasa ihie nke Kọmitii Olimpik Mba Niile